एक IP ठेगाना प्रतिष्ठा भनेको के हो र कसरी तपाईंको IP स्कोरले तपाईंको ईमेल वितरणलाई असर गर्छ? | Martech Zone
जब ईमेलहरू पठाउन र ईमेल मार्केटिंग अभियान सुरू गर्न आउँदछ, तपाईंको संगठनको आईपी ​​स्कोरवा आईपी ​​प्रतिष्ठा, धेरै महत्त्वपूर्ण छ। को रूपमा पनि चिनिन्छ प्रेषक स्कोर, IP प्रतिष्ठानले ईमेल वितरणयोग्यतालाई असर गर्छ, र यो सफल ईमेल अभियानको लागि आधारभूत हो, साथ साथै अधिक व्यापक रूपमा सञ्चारको लागि।
यस लेखमा, हामी आईपी अ greater्कको विस्तृत विवरण जाँच गर्छौं र हेर्दछौं कि कसरी तपाईं मजबूत आईपी प्रतिष्ठा कायम राख्न सक्नुहुन्छ।
IP स्कोर वा IP प्रतिष्ठा भनेको के हो?
एक आईपी अंक एक स्कोर को लागी आईपी ठेगाना को प्रतिष्ठान पठाउन संग सम्बन्धित छ। यसले सेवा प्रदायकहरूलाई मूल्या assess्कन गर्न मद्दत गर्दछ कि तपाईंको ईमेलले स्पाम फिल्टरलाई विगतमा बनाउँछ कि गर्दैन। तपाईको आईपी स्कोर विभिन्न कारकहरूको आधारमा परिवर्तन हुन सक्छ, रिसीभर गुनासो सहित र तपाई प्राय जसो ईमेलहरू पठाउनुहुन्छ।
किन IP प्रतिष्ठा महत्त्वपूर्ण छ?
एक मजबूत आईपी स्कोर मतलब तपाई एक विश्वसनीय स्रोत मानिन्छ। यसको मतलब यो छ कि तपाईंको ईमेलहरू तपाईंको अभिप्रेत प्राप्तकर्ताहरूमा पुग्नेछ र तपाईंको ईमेल अभियान प्रभावकारी हुने ठूलो मौका खडा गर्दछ। यसको विपरित रूपमा, यदि तपाईंको ग्राहक आधारले नियमित रूपमा तपाईंको संगठनबाट ईमेलहरूलाई तिनीहरूको स्पाम फोल्डरमा नोटिस गर्दछ भने, यसले कम्पनीको नकारात्मक छवि जगाउन सुरू गर्न सक्दछ, जसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ।
तपाईंको IP प्रतिष्ठाले ईमेल छुट्याउने क्षमतालाई कसरी असर गर्छ?
एक प्रेषकको आईपी प्रतिष्ठा निर्णय को प्रक्रिया को एक हिस्सा हो कि एक ईमेलमा पुगेको छ कि छैन इनबक्स वा स्पाम फोल्डर। खराब प्रतिष्ठाको अर्थ तपाईंको ईमेलहरू अधिक स्पामको रूपमा चिनो लगाइने सम्भावना बढी हुन्छ, वा केही केसहरूमा पूर्ण रूपमा अस्वीकृत। यो संगठन को लागी वास्तविक परिणाम हुन सक्छ। यदि तपाईं आफ्नो ईमेलहरूको वितरणमा विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ भने, कडा प्रेषक प्रतिष्ठा कायम गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
समर्पित IP ठेगाना र साझेदारी गरिएको IP ठेगाना बीचको भिन्नता के हो?
तपाईलाई यो जान्न चकित हुन सक्छ कि प्राय: ईमेल सेवा प्रदायकहरूलेaप्रदान गर्दैन समर्पित प्रत्येक खाताको लागि आईपी ठेगाना। अर्को शब्दहरूमा, तपाइँको पठाउने खाता हो साझेदारी गरियो बहु ईमेल खाताहरू मार्फत। यो आईपी ठेगाना प्रतिष्ठा मा निर्भर गर्दछ राम्रो वा नराम्रो हुन सक्छ:
कुनै आईपी प्रतिष्ठा छैन - कुनै नयाँ प्रतिष्ठानको साथ नयाँ आईपी ठेगानामा ईमेलहरूको ठूलो मात्रा पठाउँदा वास्तवमा तपाईंको ईमेलहरू ब्लक हुन सक्दछ, रद्दी फोल्डरमा पठाइन्छ… वा तपाईंको आईपी ठेगाना तुरून्त रोकिन्छ यदि कसैले ईमेललाई स्पामको रूपमा रिपोर्ट गरे भने।
साझा IP प्रतिष्ठा - एक साझा आईपी ठेगाना प्रतिष्ठा एक खराब चीज जरूरी छैन। यदि तपाईं ठूलो ईमेल प्रेषक हुनुहुन्न र सम्मानित ईमेल सेवा प्रदायकको साथ खाताको लागि साईन अप गर्नुहुन्छ भने, तिनीहरूले तपाईंको ईमेलहरू अन्य प्रतिष्ठित प्रेषकहरूसँग मिस्याउनेछन् कि तपाईंको ईमेल राम्रोसँग डेलिभर गरिएको छ भनेर निश्चित गर्न। अवश्य पनि, तपाईं पनि कम प्रतिष्ठित सेवाको साथ समस्यामा पर्न सक्नुहुनेछ जुन स्प्यामरलाई उही आईपी ठेगानामा पठाउन अनुमति दिइरहेको छ।
समर्पित आईपी प्रतिष्ठा - यदि तपाईं एक ठूलो ईमेल प्रेषक हुनुहुन्छ… सामान्यतया प्रति पठाउन १००,००० ग्राहकहरू, समर्पित आईपी ठेगाना तपाईं आफ्नो प्रतिष्ठा कायम राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न राम्रो हुन्छ। यद्यपि आईपी ठेगानाहरूको आवश्यक छ वार्मिंग... एक प्रक्रिया जहाँ तपाईं विशिष्ट इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू पठाउँनुहुन्छ तपाईंको सबैभन्दा व्यस्त ग्राहकहरूको एक निश्चित खण्डको लागि अवधिहरूको लागि प्रमाणित गर्नको लागि ISP जुन तपाईं सम्मानित हुनुहुन्छ।
तपाइँ कसरी एक कडा IP प्रतिष्ठा सुनिश्चित गर्नुहुन्छ?
त्यहाँ फरक कारकहरू छन् जब यो आईपी प्रतिष्ठा निर्धारण र कायम गर्न आउँछ। ग्राहकहरूलाई सजिलैसँग तपाईंको ईमेलहरूको सदस्यता रद्द गर्न अनुमति दिँदै यदि तिनीहरू एक कदम चाल्न सक्छन् भने; यसले तपाईंको ईमेलको बारेमा स्प्याम गुनासोहरू कम गर्दछ। तपाईंले कति ईमेलहरू पठाउनुहुन्छ र कति पटक तपाईं उनीहरूलाई पठाउनुहुन्छ ध्यानपूर्वक ध्यान दिनुहोस् - द्रुत उत्तराधिकारमा अत्यन्त धेरैलाई पठाउनु तपाईंको आईपी प्रतिष्ठाको लागि हानिकारक हुन सक्छ।
अर्को उपयोगी कदम भनेको तपाईंको ईमेल सूचि प्रमाणित गर्नु अप्ट-इन विधि प्रयोग गरेर वा ईमेल ठेगाना हटाईयो जुन तपाईंको मेलिंग सूचीबाट बाउन्स हुन्छ। तपाईंको सहि स्कोर सँधै समयको साथ परिवर्तन हुन्छ, तर यी कदमहरू चालेमा यसलाई सक्दो धेरै बलियो रहन मद्दत गर्दछ।
तपाइँ कसरी नयाँ प्रेषकको साथ एक कडा प्रतिष्ठा सिर्जना गर्नुहुन्छ?
चाहे तपाई बल्क सन्देशहरू तपाईको आफ्नै मेल सर्वर मार्फत पठाउँदै हुनुहुन्छ, वा नयाँ इ-मेल सेवा प्रदायकको लागि साइन अप गर्नुभयो, आईपी वार्मिंग प्रक्रिया हो जसद्वारा तपाईलाई तपाईको आईपी ठेगानाको लागि प्रारम्भिक, बलियो प्रतिष्ठा उत्पन्न गर्न आवश्यक पर्दछ।
आईपी ​​वार्मिंगको बारेमा थप पढ्नुहोस्
आईपी ​​प्रतिष्ठा जाँच गर्नका लागि उपकरणहरू
बिभिन्न सफ्टवेयर अब उपलब्ध छन् जुन तपाईलाई आईपी प्रतिष्ठा सजिलैसँग जाँच गर्न अनुमति दिन्छ; तपाईले सामूहिक मार्केटि campaign अभियानको अगाडि यो उपयोगी फेला पार्न सक्नुहुन्छ। केहि सफ्टवेयरले तपाईको प्रेषक स्कोरलाई सुधार गर्ने तरिकाहरूमा मार्गदर्शन दिन सक्छ जब तपाईं अगाडि जानुहुन्छ। तपाईंलाई सुरू गर्न यहाँ केहि छन्:
प्रेषक - वैधता को प्रेषक स्कोर तपाईको प्रतिष्ठा को मापन हो, ० देखि १०० सम्म गणना गरीन्छ। तपाईको स्कोर जति राम्रो हुन्छ तपाईको प्रतिष्ठा राम्रो हुन्छ र सामान्यतया तपाईको ईमेलको इनबक्समा पुर्‍याइने सम्भावना बढी हुन्छ जंक फोल्डर भन्दा। सेंडरस्कोरको रोलि0-०-दिनको औसतमा गणना गरिन्छ र अन्य IP ठेगानाहरू बिरूद्ध तपाईंको IP ठेगाना राख्दछ।
ब्याराकुडाकेन्ट्रल - ब्याराकुडा नेटवर्कहरूले उनीहरूको ब्याराकुडा प्रतिष्ठा प्रणाली मार्फत दुबै आईपी र डोमेन प्रतिष्ठा खोज प्रदान गर्दछ; आईपी ​​ठेगानाहरूको एक वास्तविक समय डाटाबेस संग गरिब or राम्रो प्रतिष्ठा।
विश्वस्त स्रोत - म्याकफीद्वारा सञ्चालित, ट्रस्टेड स्रोतले तपाईंको डोमेनको ईमेल र वेब प्रतिष्ठा दुबैमा जानकारी प्रदान गर्दछ।
गुगल पोस्टमास्टर उपकरणहरू - गुगलले तपाईंको पोस्टमास्टर उपकरण प्रेषकहरूलाई प्रदान गर्दछ तपाईंको जीमेलमा पठाउँदै तपाईंको उच्च आवाजमा डाटा ट्र्याक गर्न। तिनीहरूले आईपी प्रतिष्ठा, डोमेन प्रतिष्ठा, जीमेल डेलिभरी त्रुटिहरू, र अधिक सहित जानकारी प्रदान गर्दछ।
माइक्रोसफ्ट एसएनडीएस - गुगलको पोस्टमास्टर उपकरणहरू जस्तै, माइक्रोसफ्टले सेवा प्रस्ताव गर्दछ स्मार्ट नेटवर्क डाटा सेवाहरू (SDNS)। SNDS द्वारा प्रदान गरिएको डाटा मध्ये डाटा बिन्दुमा अन्तरदृष्टि हो तपाईंको आईपीको प्रतिष्ठा पठाउने, कतिवटा माइक्रोसफ्ट स्प्याम जालहरू तपाईंले वितरण गरिरहनु भएको छ, र तपाईंको स्प्याम उजूरी दर।
सिस्को सेन्डर्बेस - आईपी, डोमेन, वा नेटवर्कमा स्प्याम र मालिसियस ईमेल पठाउनको लागि वास्तविक समय खतरा डेटा।
यदि तपाईंलाई तपाईंको संस्थाको आईपी प्रतिष्ठा वा ईमेल डेलिभरेबिलिटीको लागि बढि मद्दतको आवश्यकता छ भने, थप विवरणहरूको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
टैग: ब्याराकुडा नेटवर्कहरूईमेल सेवा प्रदायकespगुगल पोस्टमास्टर उपकरणहरूइनबक्स प्लेसमेन्टइन्टरनेट सेवा प्रदायकआईपी ​​ठेगानाआईपी ​​ठेगाना प्रतिष्ठाआईपी ​​ठेगाना स्कोरआईपी ​​प्रतिष्ठाआईपी ​​स्कोरispप्रेषकविश्वस्त स्रोतवैधता